Monday 23rd March 2020 13:39:46 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Waxaan raba in aan iftiimiyo arin aan ilaa haatan caqliga saliimka ahe gali karin, waa kuraasta titalada xisbiga waddani
2. Gudoomiyaha ku meel gaadhka!!
3. Hogaamiyaha xisbiga !!
Markan aan sharciga eego maba ahaa wax sharci ah in sadex title ay isku mid noqdan taasna waxay cadenaysa in xilka xil.cabdiqaadir jirde yahay mid aan jirin oo sharciga waafiqsanayn.Cirro waa nin danisi ah oo beenta ku dheer waxaana taas ku cadenaysa marku ku guuldaraystay doorashadii in u wareejin laha xisbiga siyaasi cabdilqaadir jirde oo kasoo jeeda beesha arab ee mudan.
Shirweynihi burco ay waddani ku dhigtayn kumay soo darin ajandooyinkiisa wareejinta xisbiga wata keentay in u cabdil qaadir jirde aanu iman ba shirka oo halkaas cirro kaga baxay balan qaadkiisi beesha codka badan ka helay. Beenta iyo munaafaqdo jar bay kaa tuurta bal eeg kulmiye gudoomiye cosob bay dooran doonan halku weli cirro ku dhagsan yahay kursiga iyo in u ka daba cararo Xirsi oo hal box oo cod ah u keeni waayay xiligii doorashadii!!.
Cirro waa diktitaar lkn isma oga in u saaxadda siyaasideed khasaaro mooyane wax kale la iman.kursigii barlamaanka ayu iska dayaca , xubinti barlamaan , doorashadii 2017,taageerayaashi.bal eega xisbiga waxa weli la taagan siyaasiyiintii riday ururkii xaqsoor ee dhabar jabiyay.
Waxaan u sheegaya bulshoweynta baligubadle Cirro ma wareejinyo xisbigan ee diyaarsadda ururkeeni 2021 marka la furo ururada nin xisbigiisu sii dhacayo maxay gudoomiye nimadiisu anfici .!!
[DAAWO:-] Sida Beesha Ciida-gale Uga Xanaaqeen Hadal Ay Sheegeen Inuu Meel Ka Dhac Ahaa Oo Guddoomiye Xinif U Jeediyay